Faritra Analamanga : Ankizy 500 ahiana ho voan’ny kitrotro -
AccueilSongandinaFaritra Analamanga : Ankizy 500 ahiana ho voan’ny kitrotro
Mitombo isa hatrany ireo ankizy ahiana ho voan’ny aretina kitrotro eto Madagasikara. Ho an’ny eto amin’ny faritra Analamanga izao,dia nahitana fiakarana ny tahan’ireo ankizy voa, rehefa natao ny fitiliana teto Antananarivo Renivohitra, Antananarivo Avaradrano, Atsimondrano ary Ambohidratrimo. Izany hoe, ankizy tsy latsaka ny 500 no ahiana ho voany. Ny tsy fanaovana vakisiny no voalaza fa antony mahatonga izany, satria mbola ambany be ny tahan’ireo zaza voan’ny vaksiny miady amin’ny kitrotro.
Fantatra fa mbola mahatratra arivo sy iray alina sy iray hetsy mahery no mbola tsy nahavita izany. « Hatramin’ny nahitana fa niakatra be ny kitrotro dia efa mahatratra hatrany amin’ny 500 latsaka ny olona no ahiana ho voany. Marihina fa rehefa mafana ny olona, ka misy kibontsimbontsina na mandrotsirotsy ny vatana dia efa kitrotro no hilazana azy. Ny tahan’ny fanaovana vaksiny teto Antananarivo Renivohitra izao dia 22,94 isan-jato fotsiny raha 95 isan-jato no tratrarina. Tokony hanao vaksiny be dia be mihitsy ny olona. Marihina fa mahatratra 211 312 ny zaza latsaka ny 5 taona tokony hatao vaksiny eto an-drenivohitra, ary izay antony izay no nanitarana ny fanaovana ny vaksiny ho amin’ity herinandro ity”, hoy i Dr Rakotoarivony Manitra, talen’ny fampiroboroboana ny fahasalamam-bahoaka, eo anivon’ny minisitera. Amin’ny ankapobeny, tsy mahatratra 70 isan-jato ny vita vaksiny amin’ny resaka kitrotro eto Madagasikara. Ho an’ny eto amin’ny faritra Analamanga dia fantatra fa manodidina ny 75 isan-jato no vita fa raha toa ka 22 isan-jato fotsiny any amin’ny toerana sasany. Mbola tsy nisy kosa hatreto no namoy ny ainy araka ny fanamarihana hatrany. Miangavy fahamailoana noho izany ny eo anivon’ny ministeran’ny Fahasalamana, ary manentana ireo ray aman-dreny, ireo mpitaiza zaza hitondra ny zanany hatao vaksiny miaro amin’ny kitrotro fa mbola mitohy amin’ity herinandro ity izany. Mila zahan’ny mpitsabo ihany koa ny ankizy tsy salama mba hamantarana, na aretina kitrotro, na tsia no mahazo azy.
Namoaka ny heviny mikasika ny fitoriana napetraky ny kandidà Tabera Randriamanantsoa ny HCC izay nilaza fa « ny HCC irery ihany no mahefa amin’ny ady mikasika ny fiantsona mpifidy amin’ny fifidianana filoham-pirenena ». Hamoaka ny ...Tohiny